professional service | Asia Royal Hospital (Yangon, Myanmar)
(+951) 7538055 , (+951) 2304999
CT Scan,C Arm & X Ray
Operation Theatre Service
8AM to 8PM Services
Medical Check Up Unit
24hr ECG – Holter
Corporate Client Service and Health Insurance Service
ဆေးဝါးရောင်းချမှု (Pharmacy Service) တိကျမှန်ကန်သောဆေးဝါးများကို ကျွမ်းကျင်သော Pharmacist များဖြင့် (24)hrs ရောင်းချပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုပါက Hunt Line Ph: (+951) 2304999, (+951) 7538055 ....
ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန်အပါအဝင်ဓါတ်မှန်အမျိုးမျိုးရိုက်ကူးမှု (CT/MRI Scans & C Arm) & X Ray (က) အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံတွင် (၂၄)နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးသော ဓာတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါ စမ်းသပ်ရှာဖွေမှုများ။ (၁) Digital Radiography (ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း) (၂) ....
ပြင်ပလူနာဌာနတွင် လူနာများ၊ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပြသရာတွင်ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်စေရန် Booking ဝန်ဆောင်မှုအား လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ Booking ယူလျှင် (၂)ပတ်၊ ဆေးရုံဆင်းလူနာများ Booking ယူလျှင် (၁)လ ကြို၍ Booking ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ViberPh: (+959) ....
နှလုံးကြွက်သားစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အဆို့ရှင်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစစ်ဆေးရန် နှလုံးအထူးကုသမားတော်ကြီးများနှင့် Echo ရိုက်မည့်နေ့ရက်အား ရက်ချိန်းရယူကာ နှလုံးဓါတ်မှန်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါ သည်။ Hot Line Ph: (+951) 2304999, (+951) 538055 (Ext: 2306, ....
EEG (ဦးနှောက်လျှပ်လှိုင်းပုံရိပ်ဖော်စက်) ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်လှိုင်းများကိုတိုင်းတာ၍ဦးနှောက်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်နိုင် ရန် EEG စမ်းသပ်မှုအား Booking Service ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ Hot Line Ph: (+951) 2304999, (+951) 538055 (Ext: 2101, ....
Dent Asia Royal Clinic မှ သွားနှင့် ခံတွင်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများအတွက် Dental Imaging service ကိုနံနက်(၉)နာရီမှည(၈)နာရီအထိ(နေ့စဉ်ပိတ်ရက်မရှိ)ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များစမ်းသပ်ရိုက်ကူးပေးလျက်ရှိပါသည်။ထို့အပြင်သွားနှင့်ခံတွင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမှSpecialist directoryပါအချိန်များအတိုင်းနေ့စဉ် ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ Available Treatment Scaling & Polishing Restoration of ....
အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားမှု (Operation Theatre Service) အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသနိုင်ရန် လုံလောက်သောခွဲစိတ်ခန်းများဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော Medical Team ဦးဆောင်မှုနှင့်အတူ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်သောခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (24)hrs ကုသဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ Hunt Line Ph: (+951) 2304999, (+951) ....
နှလုံး၊ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်ရွက်ထားရှိကုသမှု (CCU, ICU) နှလုံးလူနာများနှင့် အရေးပေါ်ကုသရန်လိုအပ်သောလူနာများကို အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းတွင် ခေတ်မီ သော စက်ကိရိယာများဖြင့် အထူးကျွမ်းကျင်သော Medical Team မှ ကုသဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါ သည်။ Hunt Line Ph: (+951) ....
အဆင့်မြင့်အတွင်းလူနာခန်းများတွင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု (Inpatient Care) သက်ဆိုင်ရာ Ward များတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအား Medical Officer ဦးဆောင်သော Team မှ (24)hrs ....
ခေတ်မီအဆင့်မြင့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု (Medical Laboratory) Asia Royal Medical Laboratory သည်စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ Singapore Accreditation Council (SAC) အသိအမှတ်ပြု ISO 15189:2012 Accreditation ကို 2017 ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့ပြီး ....
4D Ultrasound (လေးဘက်မြင် ရုပ်လုံးကြွတယ်လီဗေးရှင်းဓါတ်မှန်) လှုပ်ရှားနေသောရင်သွေးငယ်၏ပုံရိပ်ကိုရုပ်ရှင်ကြည့်သကဲ့သို့ မြင်တွေ့ခံစားနိုင်ရန်၊ အလုံးအကျိတ်၊ အရည် အိတ်တည်ခြင်းများတိကျစွာရှာဖွေတိုင်းတာနိုင်ရန်နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု၍ အသားစ (biopsy) ယူခြင်းများကိုတိကျသေချာစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုတင်ရက်ချိန်းရယူကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ Hot Line Ph: (+951) 2304999, ....
Ambulance Service (လူနာတင်ယာဉ်) ကိုစီးရေ (၆)စီးဖြင့် (24)နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုအား အဝေးဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်၊ မြန်မာပြည်အပေါ်ပိုင်းမုံရွာ၊ ပခုက္ကူထိ၊ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းထားဝယ်မြို့ထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ Hunt Line Ph: (+951) 2304999, (+951) 538055 ....
Tel: (+951) 2304999, (+951) 7538055
Fax: (+951) 537296
No. 14, Baho Road, Sanchanung Tsp, Yangon, Myanmar.
Last updated on 24.2.2020
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံသည် မြန်မာပြည်သူများအကြားအသုံးပြုမှုများပြားသောViber Application ကိုအသုံးပြု၍ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကြိုတင်ရက်ချိန်းရယူနိုင်မည့်အစီအစဉ်ကိုကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုအဖြစ် တိုးချဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံတွင် ထိုင်သော ဆရာဝန်ကြီးများ၏ ကြိုတင်ရက်ချိန်းကိုViberဖြင့် ရယူနိုင်မည့်
ဖုန်းနံပါတ်သည် ၀၉-၉၇၁၈၀၄၇၀၅ ဖြစ်ပါသည်။
ကနဦးစတင်ချိန်တွင် Viber Booking လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ် နံနက် ၉နာရီမှ ညနေ ၅နာရီအတွင်းသာ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Viber Booking ယူရာတွင်ဆေးခန်းပြသလိုသည့်ရက်ထက်အနည်းဆုံး ၃ရက်မှ အများဆုံး ၂ပတ်အထိသာကြိုတင်ရက်ချိန်းရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Viber ဖြင့် ကြိုတင်ရက်ချိန်းရယူရာတွင်လိုအပ်သောအချက်၄ချက်မှာ
မိမိပြသလိုသော ဆရာဝန်ကြီးအမည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဆေးကုသရေးနယ်ပယ် (ဥပမာ - ဒေါက်တာဘ၊ နှလုံးအထူးကု)
ပြသလိုသောလူနာထံတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်၍ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် (ဆရာဝန်ကြီးများအချိန်အပြောင်းအလဲတစုံတရာရှိပါကလူနာထံအကြောင်းကြားရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။)
ဆေးခန်းပြသမည့်နေ့ရက် ( ဥပမာ - နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၈ - သောကြာနေ့)
Booking နံပါတ်နှင့် ဆေးခန်းပြသရန် ခန့်မှန်းချိန်အားဖုန်းဖြင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
မှတ်ချက် - Viber ဝန်ဆောင်မှုသည် Bookingအတွက် သီးသန့်ထားရှိသော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သောကြောင့် အရေးတကြီးဆေးခန်းပြသလိုပါက (သို့မဟုတ်) ဆရာဝန်ကြီးများဆေးခန်းထိုင်မည့်အချိန်နှင့် အခြားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါကHotline No: ၀၁-၅၃၈၀၅၅, ၀၁-၂၃၀၄၉၉၉ (လိုင်းခွဲ - ၀ သို့မဟုတ် ၁၂၁၂) သို့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
© 2019-2022 Asia Royal Hospital. All rights reserved.